ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ကျေးဇူးရှင် မှိုလိုပေါတဲ့ လောကကြီးအလယ်မှာ
"ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့မှာ ဘယ်အချိန်ကစပြီး ရလာခဲ့တဲ့ အလေ့အထ မှန်းတော့ မသိဘူး။ ကိုယ့်ကို ပညာသင်ပေးတဲ့ ဆရာတွေကိုသာမက တခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ လူတွေကိုပါ တွေ့ကရာ“ဆရာ” တပ်ပြီး ခေါ်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ ဆရာဝန်ကိုလည်း ဆရာလို့ပဲ ခေါ်တယ်။ စာရေးဆရာကိုလည်း ဆရာပဲ။ သတင်းသမားတွေကိုလည်း သတင်းစာဆရာပဲ။ ကားမောင်းတဲ့လူကိုလည်း ကားဆရာ၊ အသံချဲ့စက်ဖွင့်တဲ့လူကိုလည်း စက်ဆရာ၊ ပန်းပဲထုတဲ့လူကို ပန်းပဲဆရာ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ လူကိုတောင် ဆိုက်ကားဆရာလို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။"
စစ်ဗိုလ်တွေဌာနဆိုင်ရာရောက်လာတော့ ကျတော်တို့ကို ဆရာ - ဆရာ နဲ့၊တယ်လေးစားကြပါလားမှတ်တယ်။ နောက်မှသူတို့တပ်မှာနေတုံးက အကြပ်တွေကို ဆရာလို့ ခေါ်တာသိရတော့၊ အော် ငါတို့လဲ အကြပ်အဆင့်ဘဲရှိပါတော့လားလို့။
ဒါတောင်နောက်နှစ်များစွာဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ - ငါတော်တော် ညံ့ပါလားလို့ သိရတော့တယ်။
ဒီပိုစ်ကို ကျွန်တော် ဖတ်လိုက်ရလို့ သဘောကျတာ
ကိုပေါသိရင် ရေးသူ ဖတ်သူ နှစ်ဦးသား ပိတိဖြစ်ရမယ်.
တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ နေရင်းထိုင်ရင်း ကျနော်တို့ရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်တောင်သူဦးကြီးတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် လယ်သမားတွေနဲ့အတူ ရွှံ့ထဲမှာ ဒိုးတူပေါင်ဖက် ရုန်းနေကြတဲ့ နွားသတ္တဝါတွေကိုတောင် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်လိုလို ပြောလာကြတော့ လမ်းမှာ နွားတွေ့ရင်ပဲ ထိုင်ကန်တော့ရမလို ဘာလိုလို ဖြစ်လာတယ်။
ကိုပေါကို ဘယ်သူမှတော့ ထိုင်မကန်တော့ခိုင်းဖူးထင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာကျနော်နားလည်ထားတာပြောရရင် တောင်သူလယ်သမားကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာပဲ။ သူတို့သာမလုပ်ရင်ကျနော်တို့ဆန်တွေဘယ်ကရမလဲ။ နိုင်ငံပြင်ပကနေ၀ယ်ရမယ်။ ဒါဆို ..ပိုဈေးကြီးမယ်. ဒီလောက်ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်သူတွေကြောင့် ဆန်စိုက်သူတွေကြောင့်ကျနော်တို့ ထမင်းစားနေရတာဆိုတာလဲမမေ့ပါနဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့တွေသာမရှိခဲ့ရင်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ တကယ်တော့ အားလုံးဟာဆက်စပ်နေတာပါပဲ။ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားဆိုတာထက် အချင်းချင်းအပြန်အလှန် သိတတ်မှူလေးစားမှုရှိရပါမယ်
ကိုပေါအောက်မှာရေးထားသလို လူတိုင်းက သူတို့လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့တာဝန်သူတို့ကျေပွန်ရင်ပီးတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ.. ငါကတန်ရာတန်ကြေးပေးလို့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးဆိုလဲ လက်ခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာရှိသလို.. တခါတလေမှာ ...တန်ရာတန်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေ.. အတွက် သိတတ်မှုတွေရှိလာတာ ကျေးဇူးတွေတင်လာတာတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ..တခါတလေ ..ဆရာဝန်က.. အသက်ကယ်ဖို့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ သူ့မှာသေရေးရှင်ရေး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရှိနေတယ်။ အိုကွာ..ကျနော်မအားဘူးလို့ငြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ..တကယ်တော့ သူ့မှာငြင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမငြ်းပဲ လူနာအသက်ကိုကယ်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ပိုက်ဆံထက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တာတွေကို ငါက ပိုက်ဆံပေးထားတာပဲကွာဆိုပီး ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလူတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို မခံရတာကို ပိုကျေနပ်မိတယ်။
ပီးတော့ ငါက မင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ပဲကွာလို့ ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့သူကိုတော့ ကျနော်လည်း မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားသူက ကျေးဇူးတင်ပီး သိတတ်မှု ဟိုတဖက်ကအကူအညီလိုတဲ့အခါ ပြန်လှန်ပီးကူညီတတ်မှုက ကျေးဇူးထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာလဲ ကျေးဇူးတငိခံရသူက ငါက ကျေးဇူးရှင်ဆိုပီး မဏပ်တိုင်တက်ပြနေရင်လည်း တဖက်ကကျေးဇူးသိတတ်သူ က အမြင်ကပ်မှာပါပဲ။ ဒီလိုပို့စ်တွေက ယတိပြတ်ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်။ အခြေအနေအချိန်အခါပေါ်အများကြီးမှုတည်ပါတယ်။
ကျေးဇူးဆိုတာကလဲ တခါတလေမှာ တိုင်းတာလို့မရပါဘူး။ ကျေးဇူးဆိုတာထက် သိတတ်မှုက အရေးကြီးပါတယ်။
ပီးတော့ အနုပညာသမားဆိုတာ သူ့အလုပ်သူလုပ်တာမှန်ပေမဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ ကျွန်းကိုင်းမှီနေတာပါ။ ပရိသတ်က အားမပေးရင် သူတို့ဘယ်လိုမှဆက်လက်ရပ်တည်လို့မရတဲ့အနေအထားပါ။ ဒါကြောင့်အနုပညာရှင်တွေဟာ ပရိသတ်ကို သူတို့ရဲ့ထမင်းရှင်အဖြစ်ကို သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်ဆိုတာမမှားဘူးထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ဖက်ကတော့ ငါတို့က အနုပညာရှင်တွေရဲ့ထမင်းရှင်လို့ ဘယ်တော့မှပြောကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ပြောလာခဲ့ရင်တော့ ပရိသတ်မှားသွားမှာပါ။
ကျေးဇူးဆိုတာ ယတိပြတ်ပြောရခက်ပါတယ်။ အခြေအနေအချိန်အခါပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ဗမာတွေဟာ ကိုယ်မလုပ်ဘူးတဲ့... မလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ကို တခြားလူ လုပ်နိုင်လိုက်ရင် ဆရာလို့ခေါ်ကြတော့တာပဲ.... ဗမာတွေ မလုပ်တတ်တာတွေကလဲ ဒုနဲ့ဒေးပဲ...
တွေးချင်သလိုတွေး ရေးချင်သလိုရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ချင်သလိုဖတ်ပြီး ထင်ချင်သလို ထင်လိုက်ပါပြီ။
ကြာလေပေါတဲ့ ကြာပေါလို့ ထင်ပြီး အရင်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးများအတွက် အထင်ကြီးမှုသည် ပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့အပ်ပါသည်။
ကိုပေါတို့စာကို ဖတ်ပြီး ထပ်"ပွား"ထားတယ်။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လူတွေက ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ကြဉ်သွားမှာလည်း စိုးတယ်။
ကိုအန်ဒီပြောတာသဘောတူပါတယ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထင်ပေါ်ခြင်လို့ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူတွေလည်းရှိပါတယ် ကျိမ်းသေတာကတော့ ဘယ်သူမှကျေးဇူးတင်ခံယုံလေးနဲ့ ဒီလောက်ခက်ခဲကျမ်းတမ်းတဲ့ (အခန့်မသင့်ရင် သေနိုင်တဲ့) အလုပ်ကိုရွေးချယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်ဖန်တီးခြင်ကြစိတ်လည်းရှိနိုင်ပါတယ် ပြောရင်ပိုစ့်နဲ့ ချော်သွားနိုင်လို့မပြောတော့ပါဘူး ကိုပေါရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်မိပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်က သူ့သဘောနဲ့သူ အာဏာသိမ်း ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ဆန့်ကျင်တာကိုအတင်းလုပ် ပြီးတော့ကျေးဇူး အတင်းတင်ခိုင်းနေတဲ့ သဘာဝတွေ့ရတော့ နောင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းတွေလည်း ဒီလိုအချိုးမျိုး ချိုးလာနိုင်ပါတယ် ခုတောင် ကြံ့ဖွံ့ အဖွဲ့အစည်းက နိုင်ငံဘဏ္ဍနဲ့ လမ်းဖောက် ငွေချေးပြီး သူ့အပေါ် ကျေးဇူးရှိတဲ့အနေနဲ့ မဲပေးပြီးကျေးဇူးဆပ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံတွေ့နေရတယ်
" တချို့လူတွေဟာ သူ့ကျေးဇူးလေး နည်းနည်းလောက် ရှိခဲ့ဖူးရင်ပဲ တဖက်လူက တသက်လုံး အသက်ပေးပြီး ဆပ်ရတော့မယ့် အပေါက်မျိုး ချိုးတတ်တာ တွေ့ရဖူးတယ်။ "
ကျေးဇူးပါဆိုတဲ့ စကားကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆိုတာမဆိုတာက လူတယောက်ချင်းစီရဲ့attitude နဲ့ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ကိုပေါရေ။ ဥပမာ ဆိုက်ကားငှားစီးတဲ့အခါ ပိုက်ဆံ ပေးစီးတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့ များက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးစကား ပြောသွားကြတယ်။ တချို့ လည်း မပြောဘူး။ မပြောလို့လည်း သူ့ကို အပြစ်ပြောမလား။ ခက်တယ်ထင်တယ်နော့။ တခါတခါကျ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ ယူသူဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေးကြီးပဲ ရှိနေတာကို ကျွန်တော်တော့ သဘောမကျပါဘူး။ တဘက်မှာ ဒီကျေးဇူးကြီးနဲ့ ကိုင်တုတ် နေတာတွေကလည်း ကျောင်းဆရာတွေ၊ မီဒီယာဂုရုတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ ခြုံပြောရရင် ကျေးဇူး ပိုင်ရှင်များအဖြစ် နေရာပေးခံရသူတွေဆီမှာ (အကုန်မဟုတ်ပါ) တွေ့တွေ့နေရတယ် ထင်ပါတယ်။
နအဖ လည်း ဒီအတိုင်းပဲ
အခု ကြံဖွတ် တွေလည်း ဒီအချိုးအတိုင်းပဲ လာပြန်ပြီ။
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရတနာ သုံးပါး (ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ) ဘဲရှိပါတယ်၊ ဂိုဏ်းဆရာတွေက သူတို.ကို အလေးအမြတ်ပြုစေချင်တာနဲ. မိဘ နှင့် ဆရာ ကိုထည့်ပြီး အနန္တောအနန္တငါးပါး ဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုပြီးတော့ ခေါ်ဆိုလာကြတာပါ ၊ဆရာဆိုတာကလည်း ဂိုဏ်းဆရာ၊ ကျောင်းဆရာ ရောထွေးနေသလိုပါပဲ၊ တကယ့် ဆရာ ဆိုရင် တော့ ဗုဒ္ဓ ပဲဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်၊ "The Tathagatas (Buddhas) are only teachers " . (Dhammapada 276).
လယ်ထွန်ရာမှာ နွားကို အသုံးပြုရပါတယ် ၊ ယခုခေတ် ထွန်စက်ကို အသုံးပြုပေမဲ့ ရှေးခေတ် နှင့် ယခုခေတ် တစ်ချို.ဒေသ တွေ မှာ ကျွဲ ၊ နွား ကို အသုံးပြုရဆဲပါ ၊ သူထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဆန် နဲ. သူ.အသား ကို စားဖို.မသင့်ကြောင့် တစ်ချို. ဆရာတော်များ က အမဲသား (နွားသား) မစားဖို.ဆုံးမတာပါ၊ နွား ကို ထိုင်ကန်တော ဖို. မလိုသလို အမဲသား ရှောင်ခြင်း ၊ စားခြင်း က ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး ချင်းရဲ. ဆန္ဒပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်၊
ကျေးဇူးအကြောင်း ပြောရရင်တော့ တော်တော်ကျယ်ပြန်.ပါလိမ့်မယ် ၊
ကျေးဇူးတရား က တော့ ကူညီ ကတည်းက ဘာမှ မျော်လင့်ချက် မထား တဲ့ စိတ်ရင်းအမှန် နဲ. ကူညီ တာက အကောင်းဆုံး လို.ထင်ပါတယ်၊ မိဘ က သားသမီး ကို ပညာသင်၊ ဘွဲ.ရ ၊ အလုပ်ရ တဲ့ အထိ လုပ်ဆောင်တဲ့ ကျေးဇူးမျိုး ထင် ပါတယ်၊ ဘာမှ မျော်လင့်ချက်မထား တဲ့ ကူညီ မူမျိုးပါ၊ မိဘ အိုမင်း တဲ့ အချိန်မှာ သား သမီးများ က ကျေးဇူးတုန်.ပြန်၊ မတုန်. ပြန်ခြင်း ကလည်း တစ်ယောက်ခြင်းရဲ.
စိတ် သဘောထားအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်၊ မိဘတိုင်း လည်းကျေးဇူး ရှိမည်မထင်ပါ၊ ကိုယ့်သား၊ သမီး ကို ပြန်သတ်တဲ့ မိဘ တွေလည်းရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အများအား ဖြစ်တော့ မိဘများဟာ ကျေးဇူးရှိပါတယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သား၊သမီး တွေ ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စောင့်ရှောက် လာရတဲ့ တာဝန်က တော်တော်ကြီးပါတယ်၊ နောက် တစ်ခုက ခရီးသွားရင်း (ကား ၊ရထား ၊ လေယာဉ်ပျံ) ပေါ်မှ ကူညီတဲ့ အကူအညီမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်၊ တစ်ခါဆုံပြီး နောက်တစ်ခါ ပြန်လည် မဆုံနုိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ၊ အစကတည်းက စိတ်စေတနာ နဲ. ကူညီခြင်း က အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ ကျေးဇူးတုန်.ပြန်၊ ကျေးဇူး သိတတ်ပါက ၀မ်းသာစရာ၊ ဒါပေမဲ. ကျေးဇူးကို ပြန်လည်မတုန်.ပြန်ရင်လည်း စိတ်ဆိုးစရာ၊ ဒေါသ ဖြစ်စရာ အကြောင်း မရှိပါ ၊ ယခုအချိန် မှာ နအဖ ၀န်ကြီးများ ကို မှီခိုပြီး ရပ်တည်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားများ က သူတို.ရဲ. ကျေးဇူးရှင် က ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးလည်း သိတတ်ရပါတယ်၊ ကျေးဇူးမသိတတ်ပါက နောက်တစ်ခါ အခွင့်အရေး ရတော့မှာမဟုတ်ပါ ၊ တစ်ခါစား ၊ တစ်နပ်စားက ကျေးဇူးတရား မတုန်.ပြန်လို. ဒေါသနှင့်ယှဉ်တွဲပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ စကားလို.တောင် ထင်ရပါတယ်၊ ကျေးဇူးသိတဲ့ အနေနဲ.ဒေါ်လာ ကို နိုင်ငံခြားမှာ ရှိတဲ့ သူတို.ရဲ. account ကိုထည်.ပေးရပါတယ် ၊ တစ်ချို.က မုန်.ပုံးနဲ.ဘဲ ကန်တော့ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ. မုန်.ကိုထုတ်ပြီး ဒေါ်လာ (သို.မဟုတ်) ကျပ်ကို သိန်းနဲ.ချီပြီး မုန်.ပုံးထည့် ထဲ့ပြီး ပေးရပါတယ်၊ ချပေးတဲ့ ပါမစ် ၊ စီးပွားလုပ်ကိုင်ခွင့် ပေါ်မှ မူတည်ပြီး ပေးရပါတယ်၊ ကျေးဇူးရှင်များ နဲ. ကျေးဇူး သိတတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ် ၊
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ လူတန်းစားများလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ခု က စစ်တပ်ထဲ ၀င်တဲ့ ကိစ္စပါ၊ ငတ်လို.ပဲ တပ်ထဲ ၀င်ဝင်၊ တိုင်းပြည် ချစ်လို.ပဲဝင်ဝင် လစာနဲ. အခြား အခွင့်အရေး ရယူ ထားတာဖြစ်ပါတယ်၊ You got paid job to do it. ကျွန်တော် သတိထားမိ သလောက် ကမ္ဘာ မှာ မြန်မာစစ်တပ် တစ်ခုတည်း သာ သူတို.ကို သူတို. ကျေးဇူး ရှင်ကြီး သဖွယ် ရပ်တည်နေတာပါ၊ တော်တော့် ကို စိတ်ပျက်ဖို. ကောင်းပါတယ်၊ အမေရိကန် တပ်တွေက သမ္မတ အမိန်.နဲ. မှားမှား၊ မှန်မှန် တိုက်ဆိုရင် တိုက်ရပါတယ်၊ ဗြိတိန်လည်း အတူတူပါပဲ၊ ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်နေတဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ အီရတ် တို. က စစ်သားတွေတောင် အမိန်.နာခံပြီး သူတို.ရဲ.တာဝန်ကို သူတို. ထမ်းဆောင် နေပါတယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံတကာ တပ်ကမျှ သူတို.နိုင်ငံမှာ ငါတို.မရှိရင် မဖြစ်ဖူးလို. မပြောပါဘူး ၊ မြန်မာ တပ်မတော် ရဲ. mindset ကို ပြင်ဖို.လိုမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဘာနဲ.တူသလဲဆိုရင် မြူနှီစပယ် က သန်.ရှင်းရေးသမားက မြို.တော်ကြီး သန်.ရှင်းနေတာ ငါ့ကြောင့်လို. ပြောနေသလိုပါပဲ၊ သူ.ကိုဘဲ ကျေးဇူး တင်နေရမလို ဖြစ်နေပါတယ်၊ တကယ်တော့ လစာ ယူထားရင် ထိုက်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို တော့ လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အားလုံး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပါစေ၊
politicians? either kyant phont suckers or oppositions morons,
just want to give them three slaps
in the face and one kick in the ass.
နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လူတွေက ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ကြဉ်သွားမှာလည်း စိုးတယ်။
THIS ARTICLE IS SAME VISION OF ME ABOUT "THANKS"...........;